Ny adihevitra mitoetra ihany koa dia mahasahana ny mpiadina eto Fianarantsoa irery izao fanapahan-kevitra izao, fa efa tontosa ny any amin'ny faritra hafa toa ny an'i Vatovaty Fitovinany.
Mitohy arak'izany ny tolona tanterahan'ny Sempama eto an-toerana eo ampiandrasana ny famaliana ny fitakian'izy ireo ho an'ny mpampianatra manerana ny Nosy.
Manamafy ny mpampianatra, izay nampita ny vaovao fa miaato manomboka ny 17 jolay ny fanadinana EPS eto Fianarantsoa. Teo ambany fitarihan'ny prefen'i Fianarantsoa no nanapahana izany. Nanampy tamin'ny fikaroham-bahaolana ny tenany manoloana ny tranga niseho.
Resaka fandaminana eo anivon'ny OMC sy lafiny ara-teknika no antony nampiatoana ny fanadinana ara-panatanjahantena bakalorea, hoy ihany ny prefen'i Fianarantsoa.